Mitaky lalana mitohy ny fiofanana | NewsMada
Mitaky lalana mitohy ny fiofanana
Mandeha ila ny ezaka ho fampandrosoana sy fampivelarana ny kolontsaina malagasy. Mandray andraikitra ny isan-tsokajin-javakanto tsirairay. Manome fiofanana ny eo anivon’ny mpikirakira ny teatra. Kendren’izy ireo manokana amin’izany ny ankizy sy ny tanora. Maro ireo tonga manatrika… Saingy, aiza moa izay trano filalaovana teatra ? Ny teo aloha, tsy azo ampiasaina intsony ; ny vaovao, tsy mitsangana. Mitily sy mikitika ary mamoha ny talentan’ny tanora amin’ny alalan’ny fampiofanana sy fanatanterahana tetikasa ny fikambanana maromaro tia sarimihetsika… Firy amin’ireo efitrano fandefasana sarimihetsika no mbola misokatra amin’izao ? Manome fiofanana amin’ny fomba fanoratana tantara sy tantara foronina ny mpahay izany. Tsy vola kely anefa ny mamadika azy ireo ho tonga boky hany ka lasa haingom-batasarihina sisa ilay soratra nilofosana an-taona maro.
Ohatra ihany ireo fa maro ny zavakanto sy ny kolontsaina tojo olana tahaka izany. Amin’ny akapobeny, mahavita ny adidiny ny tompon-kevitra sy ireo miantsoroka ny fanofanana fa ny fandraisana andraikitra ataon’ny sehatra lehibe kokoa, toy ny fanjakana, ny sampandraharaha isan-tsokajiny, ny ambaratongam-pehefana isam-paritra, sns, no tsy ampy na tsy misy mihitsy.
Olana goavana mahazo ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy io. Mety hampiraviravy tanana sy hiteraka laina ho an’ireo miezaka ny mandray andraikitra ny tranga tahaka ireo. Na izany aza, tsara hatrany ny manao e ! Tsy hijerena izay ataon’ny hafa fa ny an’ny tena no atao tsara mba tsy hananan-tsiny eo anatrehan’ny taranaka sy ny firenena manontolo.